तिथि मेरो पत्रु »9तिथिहरु सैन देखि हरेक मा जान्छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुन. 02 2020 |3मिनेट पढ्न
सैन मानिसहरू वास्तविक romantics छन्; तिनीहरूले कसरी सिद्ध मिति मिति बारी थाहा. तथापि, यति धेरै ठूलो स्थानहरू शहर मा एक मितिमा जान, यसलाई आफ्नो डेटिङ योजना गलत जान गाह्रो छ. सैन जूता मा करिब नौ मिति सबैलाई वार्ता तलको खण्ड मा जाने.
1. जादू बस सुपरफास्ट मा एक सवारी
जादू बस एक मा तपाईं हुनेछ 90 सैन को मिनेट साइकेडेलिक पर्यटन यात्रा. यो रोमाञ्चक मल्टिमिडिया दौडान, तपाईं hippie संस्कृति र धेरै कुरा धेरै यस्ता अन्य 1960 को FACADES संग साक्षी प्राप्त हुनेछ. यो यात्रा तपाईं र सम्झनाहरु को आफ्नो साथी धेरै दुवै कदर गर्न दिनेछु.
2. सागर बीच उनको लिनुहोस्
आफ्नो साथी एक आउटडोर उत्साही छ भने, त्यो पक्कै यो ठाउँ प्रेम गर्नेछ. महासागर बीच सुनौलो राज्य पार्क नजिकै स्थित छ; तपाईं यहाँ खर्च छौँ समय रोमाञ्चक र रमाइलो-भरिएको हुनेछ. मा यस्तो काइट उडान रूपमा गतिविधिहरु भाग लिन, पैदल यात्रा, र साइकल; र त्यसपछि केही आराम घण्टा सँगै आफ्नो मनपर्ने ककटेल एक गिलास भन्दा बढी खर्च.
3. एक नास्ता मिति लागि मछुआरे गरेको Wharf जानुहोस्
मछुवा गरेको Wharf दिन मार्फत लगभग सबै अत्यन्तै भीड रहन्छ; तथापि, तपाईं अघि स्थानको भ्रमण गर्न व्यवस्थापन गर्न भने9a.m., यो पक्कै पनि तपाईं र तपाईंको पार्टनर खोजीमा पनि सांत्वना प्रदान गर्नेछ.
एक हार्दिक नाश्ता छ, बाहिर समुद्र सिंह जाँच र दिन progresses रूपमा घाट जाने 39 केही किनमेल लागि. एक अलि बढी रोमाञ्चक मिति बनाउन, तपाईं पनि संघ वर्ग गर्न मछुआरे गरेको Wharf देखि एक केबल कार सवारी लाग्न सक्छ.
4. एक बाइक सवारी खाडी क्षेत्र मार्फत
यदि यो एक गिरावट मिति छ, एस एफ खाडी क्षेत्र एक बाइक सवारी लागि जाने. तपाईं अनुभव हुनेछ सबै रोमान्स को एक स्पर्श हुनेछ; यो रंग होस्, को समीर वा पत्तेदार Smells.
5. एक विशेष चलचित्र मिति लागि जाने
बरु नियमित चलचित्र मिति लागि जाने, गर्न क्यास्ट्रो थियेटर टाउको, एक मनाइन्छ चलचित्र दरबार र सैन मा सबै भन्दा लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थलहरू मध्ये एक. repertory चलचित्र र चलचित्र समारोह होस्टिंग भन्दा अन्य, यो पनि विशेष घटनाहरू एक सीमा चरणमा.
6. फोर्ब्स द्वीप मा केही घण्टा खर्च
यो केवल यो भन्दा बढी रोमान्टिक प्राप्त गर्न सक्दैन; आफ्नो प्रिय साथ फोर्ब्स द्वीप भ्रमण र तिमी अवश्य केही ठूलो पोस्ट मिति सम्झनाहरु हुनेछ.
को समीर यहाँ राम्रो चिसो अक्सर छ रूपमा उनको साथ एक ज्याकेट ल्याउन आफ्नो पत्नी वा केटी साथी सोध्छन्. तपाईं उनको स्मरण गराउन बिर्सनुभयो भने, चिन्ता छैन; आफ्नो ज्याकेट वा कोट भेटी पुरानो छ, तर महिला बनाउने साँच्चै मीठो तरिका प्रेम महसुस.
7. एक हट एयर बेलुन सवारी योजना
सैन मा साक्षी सूर्यास्त एक हट एयर बेलुन देखि; आफ्नो प्रिय इच्छा पक्कै आफ्नो adventurous विकल्प प्रभावित हुन. यो विशेष अवसरमा जन्मोत्सव मनाउने लागि सिद्ध डेटिङ विचार छ. ठूलो खाना र एक रक्सी टोष्ट संग outing अन्त.
8. Crissy क्षेत्र एक यात्रा
Crissy क्षेत्र तपाईं रोमान्टिक मिति मा एक सामान्य outing बारी विभिन्न अवसर प्रदान गर्नेछ. ठाउँ, जो एक पटक एक अमेरिकी सेना एयरफील्ड हुन प्रयोग, अब गोल्डेनगेट राष्ट्रीय मनोरञ्जन क्षेत्र मा शामिल गरिएको छ.
मा Crissy क्षेत्र, तपाईं एक काइट उड्न सक्छ, नजिकैको क्याफेमा मा एक कप कफी छ, या बस बिस्तारै दुर्घटनाग्रस्त छालहरू र मनोरम तटीय दृश्यहरु हेर्दै आफ्नो साथी संग केहि शान्त घण्टा खर्च.
9. एक सिँढीको बाटो पैदल लागि जाने
यो एक धेरै simplistic डेटिङ विचार हुन देखिन सक्छ, तर तपाईं सैन सिँढीको बाटो पैदल मा हुँदा पक्कै एक हुनुपर्छ-प्रयास डेटिङ विकल्प छ. शहर अद्वितीय र सुरुचिपूर्ण stairways को एक नम्बर घर छ; यी stairways धेरै टाढा स्थित छन् र फलस्वरूप राम्रो रोमान्टिक ब्याकड्रपहरू छ. ठूलो डेटिङ स्पट बनाउन दुई सुपरफास्ट stairways लियोन सडक चरण हो, र 16 औं एवेन्यू टाइल चरण.
यी सैन बस नौ मिति मान्छे मा जा कहिल्यै सम्झना गर्नुपर्छ थिए. के उनलाई बारेमा ठूलो तपाईँलाई यी मिति कुनै पनि लागि डलर हजारौं खर्च गर्न आवश्यक छैन भन्ने छ, तर अझै पनि तपाईं आफ्नो साथी संग केही स्मरणीय र भावुक समय खर्च गर्न प्राप्त हुनेछ.
गुलाब को अद्वितीय उपहार
अनलाइन डेटिङ तपाईंको पहिलो कदम चाल्न कसरी
डेटिङ – तपाईं आफूलाई sabotaging छ?